PITA na-atọ ụtọ ndị na-emepụta ihe - China PET Tatings Cup Factory & Suppliers
3oz PET Plastic Cups with mkpuchi
Ndị a 3oz PITA Iko Plastic nwere mkpuchi bụ ezigbo nhọrọ maka ihe atụ, ihe eji esi nri, na akụkụ akụkụ. Ma ị na-ahapụ ndị ahịa gị ka ha nwaa mmanya ọhụrụ ma ọ bụ na ị na-enyefe ihe eji megharịa ọnụ na ihe ngosi ahia, iko ndị a dị mma maka iwebata ndị mmadụ na uto na ụdị ụdị gị.
Zuru okè maka nri, ihendori, ihe ọ beụ beụ na ihe nlele, ndia 3oz PITA Iko Plastic nwere mkpuchi sitere na ihe eji eme ya. PITA PET bụ naanị akụrụngwa maka iko iko a. Ha doro anya na enwere ike imegharị ya 100% maka ojiji nke abụọ.
Dọọ ndị a 3oz PITA Iko Plastic nwere mkpuchi, aha azụmahịa gị ma ọ bụ akara ngosi gị maka echefu echefu echefu bụ ezigbo ụzọ maka mgbasa ozi. Akara obibi bụ ụzọ dị mma iji kwalite ngwaahịa gị ma mee ka ọtụtụ mmadụ mara akara gị. Anyị na-enye ahụkebe akwụkwọ na emebe. Na nke aikpe, na-enyere azụmahịa gị aka ịchekwa ohere ma nweta ihe ọ chọrọ iji rụọ ọrụ nke ọma.
Shanghai COPAK Industry Co., LTD, nke e guzobere na 2010, na ụlọ ọrụ ahịa na Shanghai na ụlọ ọrụ mmepụta ihe na Zhejiang. E guzobere COPAK nke mbụ dị ka onye na-ebu akpa rọba na ihe nkiri nkwakọ ngwaahịa. Na 2015, anyị malitere azụmahịa nke PET iko na PET karama.
Dịka onye nrụpụta nwere ahụmahụ, Copak ga-ege gị ntị, nye gị ndụmọdụ ọkachamara ga-ewetara gị ọtụtụ uru. Ogo bụ mgbọrọgwụ, ndị ahịa bụ echiche. Copak na-ewere ogo na ọrụ dịka ndụ, na-enye ngwaahịa dị mma ma jiri obi dum na-ele ọrụ anya.